Carl Pei, gee ndị ahịa gị ntị ma gosipụta ihu gị ga-etinye n'ọrụ na OnePlus 3 na 3T | Akụkọ akụrụngwa
Carl Pei, gee ndị ahịa gị ntị na ihu ihu ga-etinye n'ọrụ na OnePlus 3 na 3T
Ọ bụrụ n’izu gara aga anyị kwuru maka mbata ọdịdị ihu nke OnePlus maka ndị ọrụ nke 5, nke a anyị kwuru maka ozi ọma ọzọ maka ndị zụtara ụdị mbụ na nke ahụ bụ na onye isi ụlọ ọrụ China, Carl Pei, na-ege ntị ndị ahịa ya ma gosipụta nke ahụ ga-emejuputa ihu ihu na OnePlus 3 na 3T.
Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ akụkọ ọzọ dị oke mma maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ yana karịa ihe niile maka ndị nwere obi ụtọ na arụmọrụ nke ngwaọrụ ochie ha ma achọghị ịgbanwe na OnePlus 5T dị ugbu a. N'okwu a, ọbịbịa nke ihu ihu maka OnePlus 3 na 3T nwere ike ịbụ maka mmalite nke 2018, mana anyị enweghị ụbọchị ọ bụla.
Pei onwe ya gwara ya ozugbo ya ukara Twitter akaụntụ ikpeazụ Thursday na ụbọchị ahụ Gam akporo Oreo beta ụdị maka OnePlus 5:
Ndị ọrụ OnePlus 3 na 3T, nụ nụ! ? https://t.co/dP2GB0zE7E
Carl Pei (@getpeid) December 28 nke 2017
Ọrụ ya na ụdị OnePlus 5T dị ezigbo mma ma ọ bụ ya mere ndị ọrụ ji achọ ka agbatị ya na ọdụ ndị ọzọ ndị ọzọ. Nnukwu obodo dị n'azụ OnePlus dị mkpa maka ụlọ ọrụ ahụ ma nwee ụdị mmegharị a gosipụtara ọzọ. Obi abụọ adịghị ya ụlọ ọrụ na-na-na-ike na nke a asọmpi ama ahịa ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na inwe ọdịiche adịghị mfe na ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ na ụdị ugbu a.
OnePlus na-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye ụkpụrụ ya yana ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu iji jigide ọnụahịa na uru ọ rụpụtara na ụdị izizi ya na nke ugbu a, ọ gaghị ekwe omume n'ụzọ ọ bụla, kama ịnwe ya ndị ahịa nwere afọ ojuju na ngwaahịa gị dị mkpa na OnePlus na-eme ya ogologo oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Carl Pei, gee ndị ahịa gị ntị na ihu ihu ga-etinye n'ọrụ na OnePlus 3 na 3T
Nintendo Switch na-agbakọ ihe ndekọ PlayStation 2 na Japan